व्युटिसिएनहरु वागमती सरसफाइमा उत्रिएपछि(फोटो फिचर)
काठमाडौं, १ पुस । सधै अरुको सिङगारमा तलिन व्युटिसिएनहरु ने वागमती सरसफाईमा उत्रिएका छन् । सिजन मिडियाद्धारा आयोेजिते विवाहित महिलाहरुको ‘लेट मि इन मिसेस व्यूटी क्वीन’ कार्यक्रमअन्तर्गत आज २४० औं हप्ताको वागमती सफाई कार्यक्रम गरिएको छ ।
विजय पछि घोराहीमा बाम गठबन्धनको ¥याली (फोटो फिचर)
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, २४ मंसिर । दाङमा बाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेपछि दाङको घोराहीमा विजय ¥याली गरिएको छ । जिल्ला ट्राफिक चोकबाट शुरु भएको ¥यालीले घोराही बजार परिक्रममा गर्नुका साथै अविरजात्रा गरिएको थियो । दाङमा क्षेत्र नं. ३ प्रदेश सभा (क) बाहेक अरु सबै स्थानमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले विजय हासिल गरेका छन् । हजारौ समर्थकहरुले ¥यालीमा अविर जात्रा गरेका थिए ...
दाङमा चुनावको रौनक (फोटो फिचर)
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, २१ मंसिर । आज भएइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दाङमा मतदाताहरुको रौनकता आएको छ । जिल्लाका सबै मदतानकेन्द्रहरु्रमा मतदाताहरु आफूले मन आएको उम्मेदवारलाई मत हाल्न लाइन लागेर वसेका छन् । जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भइसहेको जिल्ला मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । सम्भावित घटनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कडा पारिएको छ ...
तुलसीपुरमा बाम गठबन्धनको सक्ति प्रर्दशन
इन्द्रेणी संवाददाता तुलसीपुर, १८ मंसिर । दाङको तुलसीपुरमा बाम गठबन्धनले सक्ति प्रर्दशन गरेको छ । चुनावी प्रचारप्रसार अभियानको अन्तिम दिन घरदैलो कार्यक्रमअन्तर्गत आज तुलसीपुर बजारमा सक्ति प्रर्दशन गरेको हो । मंसिर २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावअन्तर्गत आज सोमवार राति १२ बजेबाट मौन अवधि शुरु हुदैछ ।
प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन घोराहीमा बाम गठबन्धनको ¥याली (फोटो फिचर)
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, १८ मंसिर । दलहरुको चुनावी प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन आज दाङको घोराहीमा बाम गठबन्धनले ¥याली सम्पन्न गरेको छ । ¥यालीमा उपप्रधानमन्त्री तथा दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरा, पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं. २ (१) प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार शंकर पोख्रेल र बाम अन्य समानुपालिक उम्मेदवारहरु र हजारौं वाम समर्थकहरुको सहभागीता थियो । ...
अन्तिम दिन चितवनमा प्रचण्डको ‘रोड शो’
चितवन, १८ मंसिर । प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन आज चितवनमा प्रचण्डको रोड शो गरिएको छ । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचार–प्रचार गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लाग्ने भएकाले दलका नेताहरुलाई भ्याइ नभ्याइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्डले आज चितवनमा ‘रोड सो’ गरेका छन् । ...
घोराहीमा बाम गठबन्धनको बृहत रोड ‘शो’ (फोटो फिचर)
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, १५ मंसिर । बाम गठबन्धने आज दाङको घोराहीमा बृहत रोड ‘शो’ प्रर्दशन गरेको छ । चुनावी अभियानअन्तर्गत घोराहीको सहिद गेटबाट शुरु भएको रोड ‘शो’ले घोराही बजार क्षेत्रमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोग मागेको थियो । विभिन्न जातजातिका भेषभुषामा रहेका विभिन्न झाँकीसहितको ¥याली गरिएको थियो । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा दाङ क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार ...